काष्ठमण्डपः एउटा मायावी कथा
सुरेश किरण शनिवार, साउन २२, २०७३ 29233 पटक पढिएको
काठमाडौं मूलतः एउटा मायावी नगर हो । यहाँ एकपटक छिरेपछि निस्कन गाह्रो हन्छ । काठमाडौंमा कामै गर्छ भनी आएका आप्रवासीको करा छोडौं, आफ्नो जिल्लाबाट चार वर्षको लागि भनेर चनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूसमेत चार महिनाको काठमाडौं बसाइपछि गाउँ फर्कन मन गर्दैनन् । काठमाडौंप्रतिको यो आकर्षक अहिले बनेको होइन । उहिलेका देवीदेवताहरूसमेत काठमाडौंप्रति उत्तिकै आकर्षित थिए र त्यही भएर उनीहरू काठमाडौंमा बास बस्न लोभिन्छन् भन्ने बूढापाकाको धारणा छ ।
त्यही भएर पनि होला, गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं जितेर यसलाई गोर्खा राज्यमा विलय गर्नको सट्टा आफैं गोर्खा छोडेर काठमाडौंमा राज गर्न आए । गोर्खाली राजाले जितेको कारणले राजधानी त गोर्खा हनपर्ने थियो, तर भइदियो काठमाडौं । त्यसैले केही इतिहासकारहरू यस्तो पनि तर्क गर्छन् ।वास्तवमा गोर्खाले काठमाडौं जितेको होइन, काठमाडौले गोर्खा जितेको हो । वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहले राजधानी बनाएको कारणले काठमाडौं विकसित भएको होइन । बर काठमाडौं उतिखेरै विकसित भइसकेको कारणले पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई राजधानी बनाएका हन् ।
काठमाडौंलाई मन्दिरै मन्दिरको सहर भनिन्छ । भनिन्छ, काठमाडौंमा हिँड्दै गर्दा यदि बाटोमा कहीँ ठोकिक्यो भने याद गर्नपर्छ, त्यो पक्कै कनै देवताको मन्दिर हन सक्छ । पक्कै पनि काठमाडौंको मर टोल घमेपछि यो करा भनिएको हनपर्छ । किनकि काठमाडौंको मर टोल यो सहरको सबैभन्दा बढी मन्दिरहरू रहेको क्षेत्र हो । र, यही क्षेत्रमा बनाइएको छ सबैभन्दा परानो सम्पदा काष्ठमण्डप । काष्ठमण्डप शब्द नै पछि ‘काठमाडौं' बन्न गएको हो ।
काष्ठमण्डपको ‘मण्डप' शब्द नै अपभ्रंश हँदै ‘मर' बन्न गएको हो । यो ‘मर' यति शक्तिशाली शब्द हो कि यही शब्दका कारण उक्त टोलको नामै मर टोल बन्न पग्यो । सँगैको अशोक विनायकलाई पनि परिवर्तन गरी ‘मर गणेश' बनाइदियो । साथसाथै टोलमा मरहिटी, मरबहिल आदि जस्ता ठाउँको नामकरण पनि यही शब्दबाट हन गयो ।
गएको महाभूकम्पले उपत्यकाभित्र मात्र कल पाँच सय ३७ सम्पदालाई क्षति पर्‍याएको छ । उपत्यकामा आठ सय ८८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सम्पदा तथा स्मारक रहेको तथ्यांक छ । महाभूकम्पले काठमाडौंको यही काष्ठमण्डप रहेको हनमानढोका दरबार क्षेत्रलाई धेरै नोक्सान पर्‍याइदियो । त्यहाँ लगभग ९० प्रतिशत सम्पदा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । क्षति भएका सम्पदाहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पदा चाहिँ यही काष्ठमण्डप नै हन गएको छ । काष्ठमण्डप काठमाडौंको मध्यभागमा रहेको एउटा काठको सत्तलमात्र भए पनि यो पूरा काठमाडौंको इतिहासै बोकेको सम्पदा हो ।
काष्ठमण्डप आफैंमा एउटा अनौठो संरचना हो । अहिले पनर्निर्माणको प्रसंगमा राज्यको सम्पूर्ण ध्यान काष्ठमण्डपलाई छोडेर धरहरातिर गइरहेको छ । काष्ठमण्डप छोडेर धरहरालाई काठमाडौंको पहिचान बनाउन मिल्छ ?
काष्ठमण्डप कहिले बनाए ? कसले बनाए ? किन बनाए ? यो वास्तवमा अझै पनि विवाद र बहसको विषय बनिरहेको छ । नेपालमा सायदै मात्र त्यस्तो कनै इतिहासकार होला जसले काष्ठमण्डप अर्थात् ‘मरसतः' बारे लेखेको छैन । बाबराम आचार्य, धनवज्र वज्राचार्य, नरहरिनाथ, नयराज पन्त, डा. महेशराज पन्त, दिनेशराज पन्त, डा. जगदीशचन्द रेग्मी, डा. साफल्य अमात्य, यज्ञपतिमान वज्राचार्य, रमेशजंग थापा, सरेन्द्रमान श्रेष्ठ आदि सबै नाम चलेका इतिहास र संस्कृतिका लेखकहरूले काष्ठमण्डपबारे आ-आफ्नो हिसाबले अन्वेषण गरेका छन् र लेखेका छन् । काष्ठमण्डपबारे यति धेरै इतिहासकारहरूको ध्यान जानको कारण यसको इतिहास, वास्त वा संस्कृतिमात्र होइन । यो त्यही काष्ठमण्डप हो जसको नामबाट राजधानी ‘काठमाडौं' को न्वारान गरिएको छ । काष्ठमण्डपको इतिहास नै काठमाडौंको पनि इतिहास हो ।
केही वंशावलीहरूमा काष्ठमण्डप सत्रौं शताब्दीका राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्ल (सन् १६२१-१६४१) ले बनाएको भनी लेखिएको रहेछ । लक्ष्मीनरसिंह मल्ल राजा प्रताप मल्लका पिता हन् । तर, लक्ष्मीनरसिंह मल्लले काष्ठमण्डपको जीर्णोद्धारमात्रै गरेका हन्, यसको निर्माण त त्योभन्दा पनि सयौं वर्षअघि नै भइसकेको थियो भन्ने तथ्य वि.सं. २००४ साल मै प्रकाशित भइसकेको रहेछ । तैपनि विभिन्न पाठ्यपस्तक र पर्यटनसम्बन्धी पस्तिकाहरूमा अहिले पनि लक्ष्मीनरसिंह मल्लको नाम हटेको पाइँदैन ।
तर, विभिन्न समयमा पाइएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले भने काष्ठमण्डपको निर्माण लक्ष्मीनरसिंह मल्लभन्दा पनि करिब ६ सय वर्षअघि नै भइसकेको प्रमाण दिएका छन् । यसरी सरसर्ती हेर्दा काष्ठमण्डपले केही नभए नि हजारदेखि १२ सय वर्षको लामो इतिहास बोकेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
काष्ठमण्डप आफैंमा एउटा अनौठो संरचना हो । नेपालभाषामा यसलाई ‘मरसतः' भनिन्छ । ‘सतः' भन्नाले पाटी वा सत्तल भन्ने बझिन्छ । तर यो अरू पाटी जस्तो सामान्य खालको भने छैन । यो एकदमै खल्ला भएकोले यहाँ अरू सत्तलमा जस्तो मान्छे सत्न खासै मिल्दैन । यहाँभित्र गोरखनाथदेखि विभिन्न भैरव र गणेशका मूर्तिहरू छन् । तर, देवताको मूर्ति भए पनि यो मन्दिर भने होइन । मरसतः निर्माण भएको बेला यसभित्र कनै पनि मूर्ति थिएन । कनै मूर्ति वा वस्त नभएको कारणले नै यसलाई ‘मर' अर्थात् केही नभएको ‘सतः' भनिएको हो भन्नेहरू पनि छन् ।
तर, काष्ठमण्डपको निर्माणमा पूर्णतया तान्त्रिक विधि अपनाइएको छ भन्ने मत राख्ने विद्वानहरू भने ‘मर' शब्द ‘मेर'बाट आएको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनसार, काष्ठमण्डपको निर्माणमा अत्यन्तै गह्य खालका सूक्ष्म विधिहरू अपनाइका छन् जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘मेर' भनिन्छ । अत्यन्त गह्य कराहरू काष्ठमण्डपसँग जोडिएको कारणले यसको निर्माणमा ती कराहरू छटाउन नहने पनि दाबी पनि उनीहरूले गरिरहेका छन् ।
काष्ठमण्डपबारे धेरैले विश्वास गर्दै आएको एउटा जनविश्वास के हो भने यो मण्डप एउटै रूखको काठ प्रयोग गरी बनाइएको हो । रूख यति ठूलो थियो कि त्यसबाट पूरा काष्ठमण्डप बनाइसक्दा पनि काठ सकिएन । बाँकी रहेको काठबाट काष्ठमण्डपको छेउमै अर्को एउटा सत्तल पनि बनाइयो जसलाई ‘सिँल्यं सतः' अर्थात् ‘बाँकी रहेको काठको सत्तल' भनिन्छ ।
यसपछि पनि बाँकी रहन गएका काठका टक्राटाक्रीहरू जम्मै यी दई सत्तलहरूको बीचमा एउटा खाल्डो खनी त्यहाँ गाडिएको थियो । त्यसपछि खाल्डोमाथि एउटा डबली बनाइयो । त्यसलाई मर दब भनिन्छ । केही गरी काष्ठमण्डप मर्मत वा जीर्णोद्वार गर्नपर्‍यो भने त्यही खाल्डोबाट परानै काठ झिकी प्रयोग गर्नपर्छ भन्ने कथन छ ।
काष्ठमण्डप बनाउँदा त्यसमा प्रयोग गर्नपर्ने काठहरू जम्मै नजिकैको एउटा बौद्ध बहालमा डंगर बनाई राखिएको रहेछ । त्यो बहाललाई अहिले पनि ‘सिँखंमू बहाः' भन्ने गरिन्छ । नेपालभाषामा ‘सिँ' को अर्थ काठ र ‘खं' को अर्थ डंगर हन्छ । यो बहाल अहिले कमारी चोकसँगै जोडिएर रहेको छ ।
काष्ठमण्डप बनाउन यस्तो अनौठो काठ जन रूखबाट प्राप्त भएको हो त्यो रूखलाई कल्पवृक्ष भनिएको छ ।
यो रूखको हाँगा एक किलोमिटरसम्म फैलिएको थियो रे ! त्यतिबेला काठमाडौंमा हरिसिद्धिको जात्रा हेर्न कल्पवृक्ष पनि मान्छेको भेषमा आएका रहेछन् । एकजना तान्त्रिकले त्यो करा थाहा पाई कल्पवृक्षमाथि तारण लगाएर उनलाई यहीँ कैद गरिदिएछन् । त्यसपछि उक्त तान्त्रिकले ‘यो ठाउँमा तेत्तिसकोटी देवतालाई बास गराउन मिल्ने एउटा ठूलो संरचना बनाउने विचार छ, त्यसको लागि कल्पवृक्षको काठ चाहियो' भनी माग गरेछन् । उनको मागअनसार, कल्पवृक्षले एउटा बीउ छोडेर गएछन् । तान्त्रिकले त्यही बीउबाट उम्रेको वृक्ष काटेर काष्ठमण्डप बनाए । काष्ठमण्डप बनाइसकेपछि उनले तेत्तीसकोटी देवतालाई आह्वान गरी त्यहीँ बास गराए ।
उनले देवताहरूलाई काष्ठमण्डपको प्रतिष्ठा नसकन्जेल फर्कन नपाइने बाचा गराए । र, प्रतिष्ठा चाहिँ नन र तेलको भाउ एउटै भएपछि मात्रै गर्ने करा पनि सनाए । तर, नन र तेलको भाउ कहिल्यै समान नहने रहेछ । त्यसैले तेत्तीसकोटी देवताहरू पनि फर्कन नपाई अहिलेसम्म पनि काष्ठमण्डपमै बास बसिरहेका छन् भन्ने जनविश्वास छ । त्यसैले काष्ठमण्डपलाई एकचोटी घमेपछि तेत्तीसकोटी देवतालाई नै घमेसरह पण्य प्राप्त हन्छ भनिन्छ । त्यो काष्ठमण्डप बनाउने तान्त्रिकको नाम चाहिँ कसैले ‘बोसेत' भनेका छन्, कसैले लीलावज्र वज्राचार्य भनेका छन् ।
कोहीचाहिँ काष्ठमण्डप नाथ सम्प्रदायका एक सिद्ध ‘लइपा'ले बनाएको हो भन्ने दाबी पनि गर्छन् । नाथ सम्प्रदायका ८४ सिद्धमध्ये लइपा एक हन् । लइपाले काष्ठमण्डप बनाएको कारणले नै त्यहाँ भित्र गोरखनाथको मूर्ति रहेको दाबी उनीहरूको छ ।
देशकै यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्पदा वैशाख १२ को महाभूकम्पमा ढल्यो । तर, अहिले पनर्निर्माणको प्रसंग आउँदा भने राज्यको सम्पूर्ण ध्यान काष्ठमण्डपलाई छोडेर धरहरातिर गइरहेको छ । भर्खरैमात्र नयाँ निर्माण हने नयाँ धरहराको नक्सा सार्वजनिक गरियो । अब खिचापोखरी क्षेत्रको ४२ रोपनी जग्गामा ३ अर्ब लगानी गरी नयाँ धरहरा बनाउने योजना सरकारले बनाएको रहेछ । सम्पदा क्षेत्रमा भएको यत्रो विशाल क्षतिपछि राज्य, सर्वसाधारण र यहाँसम्म कि मिडियाको समेत ध्यान धरहरामा गएर अडिएको देख्दा उपत्यकावासीको मनमा अर्को परकम्प गइदिएको छ । साथै यसले हाम्रो ‘सम्पदा चेत'को दायरालाई पनि प्रष्ट्याइदिएको छ ।
भर्खर दई सयवर्षे इतिहास बोकेको धरहरा नेपालको मौलिक सम्पदासमेत नभएको तथ्य सार्वजनिक भइ नै सकेको छ । महाभूकम्पले धरहराभन्दा पराना, धरहराभन्दा महर्‍वपूर्ण र धरहराभन्दा ऐतिहासिक अरू धेरै सम्पदाहरू ध्वस्त पारेको छ । तर, पनि हाम्रो ध्यान अझै पनि केवल धरहरामा किन केन्द्रित छ ? राष्ट्रसंघीय निकाय यनेस्कोले नेपालको सातवटा सम्पदालाई विश्व सम्पदाको सूचीमा राखेको छ ।
त्यो सातवटामा धरहरा पर्दैन । योबाहेक अर्को १५ वटा महर्‍वपूर्ण स्थलहरूलाई भविष्यको विश्व सम्पदा भनी सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको छ । त्यो १५ वटामा पनि धरहरा पर्दैन । पर्यटन नेपालको लागि विदेशी मद्रा आर्जन गर्ने सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो । तर, नेपालमा आजसम्म एउटै पनि त्यस्तो पर्यटक आएको छैन होला जसको मूल उद्देश्य काठमाडौंको धरहरा हेर्न हो । यति हँदाहँदै पनि विश्वभरि किन धरहरालाई नै भूकम्पको प्रतीक बनाएर प्रचार गरियो ?
काठमाडौंका रैथानेहरू यसलाई ‘सांस्कृतिक पूर्वाग्रह' ठान्दछन् । मल्लकालीन सम्पदाहरूलाई छोडेर शाहकालीन सम्पदालाई महत्व दिने ‘महेन्द्रवादी' सोचको निरन्तरता ठान्छन् यसलाई काष्ठमण्डपका रैथानेहरू ।
यसका पछाडि एउटा विजित र अर्को विजयी देशको शासकीय मानसिकताले काम गरिरहेको आरोप पनि काठमाडौंवासीको छ । भलै यो आरोप यथार्थभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक बढी होला । तर, यसमा पटक्कै सत्यता छैन पनि भन्न सकिन्न ।
भूकम्प आउँदा धरहरा ढल्न त स्वाभाविक नै थियो । किनकि त्यसको उचाइले नै भूकम्पको झट्का थेग्न दिँदैन । १९९० सालमा पनि ढलेकै थियो, अहिले पनि ढल्यो, यदि यो पनर्निर्माण भयो भने अर्को भूकम्पमा पनि त्यो ढल्छ नै । धरहरा काठमाडौंको ‘माटो सहाउँदो' संरचना होइन । न यो काठमाडौंको मौलिक वास्त नै हो । पाँचतल्ले घर बनाउन नहने काठमाडौंको जमिनमा नौ तल्ले धरहरा यदि कसैले बनाउँछ भने उसले काठमाडौंलाई बझेकै छैन भन्दा फरक नपर्ला । धरहरालाई नेपालकै एकमात्र सम्पदा ठान्नबाटै थाहा हन्छ, उनीहरूको सांस्कृतिक चेतना अहिलेसम्म परिपक्व भइसकेको छैन ।
जो नेपालको पहिचान बोक्ने सम्पदा हो, जो नेपालको इतिहास बोल्ने सम्पदा हो, जो देशमा पर्यटक भित्र्याउने सम्पदा हो ती सम्पदाको महत्व बझ्ने चेतनाकै कमी हामीसँग रहेको देखियो ।
धरहरालाई जसले भूकम्पको प्रतीक बनाए उसले पनि धरहराको सांस्कृतिक महत्व भन्दा पनि त्यसको उचाइ हेरेर यस्तो गरेको भान हन्छ । यदि धरहरा साँच्चै त्यति नै ठूलो सम्पदा हो भन्ने लागेको भए त्यहाँ सर्वसाधारणलाई चढ्न किन दिइयो ? पार्क र पोखरी सञ्चालन गरेजस्तै धरहरा सञ्चालन गर्ने ठेक्का किन व्यापारीलाई दिइयो ? राष्ट्रिय महत्वका सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षण गर्ने जिम्मा राष्ट्रको हो कि व्यापारीको ? रातो जति राम्रो भनेजस्तै अग्लो जति ठूलो भन्ने बालमनोविज्ञानमा आधारित भएर धरहरालाई भूकम्पको प्रतीक बनाएको देखिन्छ ।
धरहराले काठमाडौंको पहिचान बोक्दैन । बोक्ने त काष्ठमण्डपले नै हो । धरहरालाई काठमाडौंको पहिचान बनाउन खोज्न भनेको काठमाडौंको पहिचान मेटाउन खोज्न हो ।
साढे ११ लाख सरकारी खर्च बोकेर गाउँपालिकाको टोली भारत भ्रमणमा 1659